Diego Simeone ma leh qalbi iyo farxad ... Jose
Daafaca reer Brazil Filipe Luis ayaa ka hadlay waqtigiisii ​​Atletico Madrid iyo sanadkiisii ​​niyad jabka ahaa ee Chelsea.
Waxa uu inta badan waayihiisa ciyaareed kusoo qaatay Diego Simeone kooxda Atletico Madrid wuxuuna muujiyay waqtigiisii ​​guulaha badan ee Rojiblanco oo ay hareeyeen isku dhacyo, xifaaltan iyo kalsooni la’aan macalinkiisa.
Filipe Luis oo hada u ciyaara xulka qaranka Brazil ayaa wareysi uu siiyay Daily Mail ee dalka Ingiriiska wuxuu ku tilmaamay Diego Simeone dhaqankiisa edeb darada ah iyo khiyaanada uu sheegay inuu ku sameeyay Jose Mourinho.
Intii lagu jiray tobankii sano ee uu joogay Atletico Madrid, Filipe Luis wuxuu ciyaaray inta badan intii uu socday Simeone, isagoo kula guuleystay La Liga iyo labo jeer finalka Champions League, laakiin Filipe Luis wuxuu ku eedeeyay Simeone inuusan aheyn tababare, ma ahan “wadnaha” ama wax farxad ah.
“Qaado ereygeyga, ma ahan wax fudud in loo ciyaaro Simeone. Qalbi ma lahan. Weligiis isma dhaho,” Oh, waa nasiib darro, waa ciyaaryahan yar oo xun, waxaan u baahanahay tan ama tan. “Maya. inuu guuleysto.
“Markii uu qabtay xilka kooxda 2011, kooxdu waxay afar dhibcood ka sarreysaa aagga heerka labaad, waxayna ku guuleysatay Europa League isla xilli ciyaareedkii. Wuxuu abuuray koox xayawaan ah oo ay hadda yihiin. Guushaas waxay leedahay magac, Diego Simeone.”
Filipe Luis ayaa sidoo kale ka hadlay qaabkii uu Simeone ula dhaqmay ciyaartoyda: “Ilaa 120 ciyaartoy ayaa kooxda ku soo biiray tan iyo markii uu yimid, qaarkood waxay ahaayeen xiddigo, laakiin ma ciyaarin, qaar kalena waxay yimaadeen iyaga oo aan sumcad lahayn waxayna noqdeen xiddigo
“Waa guul weyn. Waqti iskama lumiyo. Marnaba ma dhahayo ‘ah, aan iska faraxno maanta’.
Waxaan ahaa daafac aan amni aheyn markii uu yimid bishii Diseembar, waxaan ahaa daafaca bidix ee ugu fiican adduunka Janaayo. Isagu waa qofka kaliya ee ku guuleystay inuu sidan oo kale iga dhigo. “
Jose Mourinho ayaa hadlay ka dib xilli ciyaareed niyad jab leh oo ay Chelsea ka soo iibsatay Atletico isla markaana uu ku fashilmay inuu ciyaaro wuxuuna ku eedeeyay tababaraha reer Portugal khiyaamo.
Kadib waxaan dareemay inuu igu khiyaanay ereyadiisa macaan. Ma aanan dooneynin inaan la shaqeeyo Mourinho sanad kale. Laakiin isagu khalad ma ahayn. Waan ku guuleysanay koobkii waxaana la aadnay guriga abaalmarintii! ”
John Terry ayaa amaanay Filipe Luis wuxuuna yidhi: “Waa hogaamiye dhab ah oo si adag u hadla wakhtigiisa waana kan ugu horeeya ee gacanta u taagay guul darada.”